Fomba fitsangatsanganana an-tsandrin'i Cuckoo, nataon'i Sydney Bristow
Ary efa misy tarehin-tsoratra roa mahay manidina ambonin'ny akanim-borona. Voalohany indrindra, Randle Patrick McMurphy, izay niarahanay nitazana ny tànan'i Jack Nicholson histrionika rehetra tao amin'ny fandikany hadalàny ilay mahery fo tamin'ity tantara ity momba ny hopitaly ara-tsaina sy ny mponina ao aminy. Amin'ny toerana faharoa dia hitantsika izao i Sydney, vehivavy iray eo anelanelan'ny tena toetra sy ity solon'anarana nampiasaina ity ho an'ny tantaran'ny dingana iray amin'ny hadalàn'ny fandinihan-tena avy amin'ny fotoana mampivadi-po izay nanapahany hevitra handao an'izao tontolo izao amin'ny sidina iray izay nanamontsana taolana samihafa ihany. .
Ny marina dia ilay fanoharana hafahafa amin'ny fisidinana ambonin'ilay akanim-boromailala amiko dia toa marina indrindra mba hamaritana izay dingana fahaketrahana ara-tsaina. Tsy misy hadalana loatra ary miaraka amin'izay dia tandindona. Amin'ny hafahafa ny hevitra dia mitoetra izany ody voalohany an'ny olona mamorona hevitra izany. Manidina ambonin'ny akanim-borona mba hamaritana ny fivoahana avy amin'ny tena, ny depersonalization izay mamolavola ny sitra-pon'ilay olona mankamin'ny tsy fahampian'ny fifehezana sidina tsy misy dikany.
Ary ankoatr'izay, hoy aho dia nanandrana nanidina i Sydney. Raha ny tena izy, tsy eo amin'ny akanim-boromailala fa avy amin'ilay tetezana izay nanandramany nanao veloma an'izao tontolo izao, tontolo iray tsy misy olona satria toa feno fitahiana sy harena amin'ny zavatra heverin'ny olona rehetra ho fahasambarana.
Ny tantaran'ny zava-nitranga tamin'ny taolan'i Sydney dia avy tamin'i Ana, izay namolavola ny toetrany ny fizotrany nandritra ny vanim-potoana teo anelanelan'ny mpitsabo aretin-tsaina, ny fanafody ary ny ivon-toerana. Ary io tantara io dia mitaky ny 37 andro nivezivezy tao amin'ny akanin-tranon'i cuckoo avy any ambony i Sydney, nitady tadiavina tamin'ny fotoana nanombohany nankafy ny fomba fijery.
Satria indraindray io tsy fitovizan-toetra io, io fahaverezan'ny finiavana izay manangana ny anjarantsika io, dia manampy antsika olombelona ihany koa ary tsy afa-manoatra, miharihary nefa manana fahatsapana mafy indray fa tsy nisy rindrina natsangana nandritra ny taona maro.
Ao amin'ny diary voasoratra "roa-tànana" eo anelanelan'ny Ana sy ny ego ego Sydney, dia mahita tantara iray momba ny fiakarana sy ny fidinana an-tsary izay mety ho an'ny saina isika. Fa ambonin'izany rehetra izany dia hitantsika fa ny zanak'olombelona, ​​amin'ny lafiny tsara indrindra, dia mihalehibe amin'ireo izay mitambatra manoloana ny fitsapana. Ary tsy misy fisedrana ratsy noho ireo matoatoa nifoha avy tao anaty ho an'ireo rehetra izay manidina ambonin'ny akanim-borona amin'ny fotoana iray.
Azonao atao izao ny mividy ny boky How I Flew Over the Cuckoo's Nest, diary Sydney Bristow, eto:
Tags Boky ankehitriny, Sydney bristow